Zanj Radio: Onjam-peon’ny Mozika Antserasera Ao Jamaika Miaraka Amin’ny Hafatra Ara-tsosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2016 10:24 GMT
Jamaica to the World (Jamaika amin'izao tontolo izao)– Radio manana tanjona amin'ny endrika radio antserasera Zanj Radio. Sary avy amin'i Zanj Rracc, nahazoan-dalana.
“Ny zavatra tsara iray momba ny mozika … rehefa mandona, tsy mahatsapa maharary ianao.”
Hoy ny hiran'i Bob Marley tao amin'ilay hirany fankalazana Trenchtown Rock. Anaty ran'i Jamaika ny mozika – indrindra ny mozika reggae, miaraka amin'ireo karazany rehetra, ary manana fahafahana hitondra lavitra ny fitaovana fototry ny famoronana ny teknolojia.
Mpandraharahan'ny media hiditra eo amin'ny faha-28 taonany i Orrin Carr. Na fantatra amin'ny anarana hoe Zanj Rracc, izy no mpanorina ny radio antserasera Zanj Radio, izay natombony tamin'ny 2010, ary miasa ao amin'ny efitra fipetrahany ao amin'ny Anjerimanontolon'i West Indies Mona ao Kingston.
Zanj Rracc, mpanorina ny Zanj Radio. Sary avy aminy, nahazoan-dalana.
Mandefa mozika Afrikanina isan-karazany sy mihetsiketsika (manomboka amin'ny dancehall hatramin'ny hip hop ary ny Jazz) ny radio, manomboka ny Zoma alina hatramin'ny Alatsinainy maraina, saingy mikasa hisokatra 24/7.
Niitatra ihany koa ny fijerin'i Zanj. Mahita ny fampielezam-peo tsy ho sehatra ho an'ny mpanakanto tsy dia malaza mba hanehoana ny sangan'asan'izy ireo ihany izy fa ho sehatra fanehoana ankapobeny, mampiditra ny mozika manerantany ao anaty fifangaroana miavaka sy mahafinaritra. Afaka kelikely, te hampiditra fandaharana resadresaka sy fanatanjahan-tena izy. Naneho ny heviny i Zanj:
Nitombo nahatsapa ny maha zava-dehibe ny manana fikambanana haino aman-jery manome fahafahana ho an'ireo haino aman-jery, DJ, mpihira sy mpanakanto mpamorona vao misondrotra aho. Nanampy ahy hamolavola ny ZANJ Radio amin'izay sokajiako ho ‘sehatry ny media azo antoka ao amin'ny aterineto” izany, ka olona samihafa no tonga miaraka mba hampiseho ny talentan'izy ireo.
Manana DJ efatra ny radio, anisan'izany i DJ Cane (izay jamba) sy DJ Afifa, izay mamaritra ny tenany ho “mpanakanto am-peo,” mamorona fifangaroana mozika sy feo mampiseho fihetseham-po sy mampita hafatra manokana. Afifa no mpanorina ny Ivo-toerana Di ho an'ny Fitarihana Ara-tsosialy, tetikasa fanabeazana eny ifotony ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe izay mampiditra ny zavakanto sy ny famoronana amin'ny fianarana ho an'ny mponina ao amin'ny toerana manodidina anjakan'ny herisetra. Mpiara-manorina ny SO((U))L HQ ihany koa izy, toerana fifanakalozan-kevitra sy fifampizarana momba ny zavakanto, kolontsaina sy ny zon'olombelona izay miorina ao amin'ny Tendrombohitra Vato Maitso Mavana, izay manamorona ny renivohitra. Ao no misy ny Zanj Radio ankehitriny, izay mandefa fandaharana ho an'ny mpihaino mahafatra-po ao Brezila, Rosia sy any an-kafa.
Mozika ho an'ny fanahy, sary avy amin'i Zanj Rracc, nahazoan-dalana.
Tsy mozika fotsiny ihany ny Zanj Radio, ary mahita ny tenany mihoatra lavitra noho ny DJ i Zanj Rracc. Vao nahazo mari-pahaizana teny Anglisy vao haingana, miasa eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona sy mampianatra teny anglisy ao amin'ny Foibe Fanarenana Olon-dehibe Lalana Tower sy ny Foibe Fanarenana Olon-dehibe St. Catherine, fonja azo antoka ara-piarovana indrindra any Jamaika ao amin'ny tanànan'i Kingston sy ny Tanàna Espaniola, koa i Zanj. Te-hahita ny fivoaran'ny Zanj Radio ao anaty fandraharahana tahaka ny rehetra izy, mampiasa Jamaikana na eo aza ny tantaran'ny fanagadrana azy ireo, ny fahasembanana na antony hafa mety mahatonga azy ireo ho “tsy azo ampiasaina.” Manana filozofian'ny fahasamihafana, ny rariny ara-tsosialy, fanabeazana sy fampitokisan-tena ireo vondrom-piarahamonina niangarana ny onjam-peony ao Jamaika.
Amin'ny fanefena ny lalam-pamoronan'izy ireo, nisedra zava-tsarotra maro i Zanj sy ny mpiara-miasa aminy, mianatra amin'ny fomba sarotra. Amin'ny fahatsapana ny filàna hanitatra ny fitantanana ny mediany, ny orinasany sy ny fahaizany ara-teknika, mianatra ao amin'ny Ivom-pampianarana Teknolojian'ny Fitondram-Panjaka Soedoa (KTH) raitra i Zanj, izay nanomezana azy toerana iray tao hianarana ny fifehezana (master) ny fitantanana haino aman-jery. Ahitana an'i Daniel Ek (mpanorina ny Spotify) sy Alexander Ljung (Soundcloud) ny maintimolalin'ny Ivom-pampianarana.
Saingy mbola maro ireo sakana tsy maintsy hianihana: mba hahitana vatsy amin'ny fianarany, nitodika tamin'ny fanangonam-bola i Zanj . Araka ny nolazainy tsotra hoe:
Tsy vondrona media iray hafa fotsiny ity. Fa vahaolana.